काठमाण्डौं । जेष्ठ ३२ ।नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) कर्णाली प्रदेश संसदीय दलले भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले वितरण गर्ने तयारी गरेको कृषि व्यवसाय प्रर्वद्धन अनुदान कार्यक्रम रोक्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ । आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा मन्त्रालयले झण्डै रु तीन करोड अनुदान वितरण गर्न थालेपछि दलले कार्यक्रम रोक्न सिफारिस गरेको हो ।
संसदीय दलका प्रमुख सचेतक गुलाबजङ्ग शाहले उक्त कार्यक्रम तत्काल स्थगन गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको बताउनुभयो । दलको बैठकमा अधिकांश सांसदले मन्त्रीका आफन्त तथा राजनीतिक पहुँचवालालाई अनुदान वितरण गर्न थालेकामा भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विमला केसीको आलोचना गरेका थिए । कृषि मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्ष कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन कार्यक्रमअन्तर्गत अनुदानस्वरुप ११६ जनालाई गरी रु दुई करोड ९५ लाख रकम वितरणका लागि छनोट सूची प्रकाशित गरेको थियो ।
संसदीय दलका नेता एवं मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको अध्यक्षतामा सम्पन्न बैठकले भोलि (असार १ गते) सार्वजनिक गर्ने बजेटका सम्बन्धमा पनि प्रदेश सरकारलाई सुझाव दिएको छ । प्रदेश सरकारले भोलि ल्याउने आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को बजेटमा रु दुई अर्बको कोरोना विशेष प्याकेज समावेश गर्न सुझाव दिएको हो । कोरोना महामारी रोकथामको समय अनिश्चित भएकाले स्वास्थ्यलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा दलले जोड दिएको छ ।
सार्वजनिक लेखा समितिका अध्यक्ष दिनबन्धु श्रेष्ठले अनुदान वितरणमा बेइमानी गरिएको विषय छ्याप्छ्याप्ती आइसकेकाले समितिले छानबिन गर्ने बताउनुभयो । “राज्यको करोडौँ बजेट मन्त्रीका आफन्त, दलका नेता र कार्यकर्तालाई बाँड्न पाइँदैन”, उहाँले भन्नुभयो, “सरकारले कस्तो कार्यविधि बनाएको छ ? कसरी–कुन आधारमा अनुदान दिन थालियो ? हामी छिट्टै छानबिनको विषय बनाउँछौँ ।” यस विषयमा विभागीय मन्त्रीलाई बोलाउने उहाँको भनाइ छ ।